Sida loo daro burushka Photoshop | Hal-abuurka khadka tooska ah
Adobe Photoshop, shaki la'aan, waa mid ka mid ah barnaamijyada ay inta badan isticmaalaan naqshadeeyayaasha adduunka oo dhan, labadaba si ay u saxaan sawirada iyo in ay ka abuuraan meel eber ah ama ka bilaabaan muuqaalkooda. Waana taas Photoshop waa mid ka mid ah barnaamijyada naqshadeynta ugu dhameystiran, maadaama ay leedahay tiro badan oo ikhtiyaari ah iyo qalab.
Maqaalka maanta, waxaan uga hadli doonaa qalabka burushka iyo sida loogu daro burushka Photoshop si fudud oo degdeg ah. Sidaan sheegnay, Photoshop wuxuu bixiyaa buug-gacmeedyo aad u kala duwan oo buraash ah iyo suurtogalnimada in lagu habeeyo iyaga, iyada oo loo marayo hagaajinta si loogu waafajiyo baahiyaha naqshadeeyaha.
Qalabka burushka ee barnaamijkan, oo loo yaqaan burushyada dunida Anglo-Saxon, looguma talagalin oo kaliya shaqada sawiridda, laakiin waxay noqon kartaa ku sawir, qurxi oo ku samee waxyaalo aan dhammaad lahayn, maadaama sida aan soo sheegnay, waxaa jira kala duwanaansho weyn.
1 Halkeed ka heli kartaa burush aad ku darto Photoshop?
2 Sida qalabka burushka uu ugu shaqeeyo Photoshop
3 Sida Buraashka loogu daro Photoshop
Halkeed ka heli kartaa burush aad ku darto Photoshop?
Haddii aan ka baadho internetka, tiro badan oo ah portals web ama xitaa blogs ayaa soo bixi doona halkaas oo nala soo bandhigi doono a ku qor tixraacyo badan si aad u soo dejiso. Intaa waxaa dheer, naqshadeeyayaasha qaarkood waxay abuuraan burush khaas ah waxayna la wadaagaan isticmaalayaasha kale bilaash ama lacag yar. Dabcan, waxa kale oo jira ikhtiyaarka burushyada Premium oo ay tahay inaad bixiso lacag si aad u hesho.
Maaddaama aan ka heli karno, sida aan horayba u sheegnay, noocyo kala duwan oo buug-gacmeedyo bilaash ah oo internetka ah, waa inaan caddaynaa in haddii aan soo dejino burush bilaash ah, dad badan ayaa laga yaabaa inay haystaan, sidaas darteed, dhinacaas wax gaar ah ayaa meesha ka baxaya waqtiga aan u isticmaalno mashruucayaga.
Wax aad muhiim u ah waa in sidoo kale la tixgeliyaa, waana shatiga lagu soo dejiyo burushyadan. Caadi ahaan waxay hoos maraan a shatiga aan ganacsiga ahayn, taas oo inoo horseedaysa in aan loo isticmaali karin mashaariicda hadhow la suuq gayn doono.
Si aad si fiican u baadho, talada aanu ku siino waa in marka aad samaynayso raadintaas, ku qor "X burushyada Adobe Photoshop", taas oo ah, muuji nooca burushka aad rabto, markaa natiijadu waxay noqon doontaa mid gaar ah oo aanad wakhti lumin. ka raadinta shabakado kala duwan.
Sida qalabka burushka uu ugu shaqeeyo Photoshop
Qalabka burushka waa mid ka mid ah inta badan ay isticmaalaan xirfadlayaasha ee dunida design.
Waxaan furi doonaa barnaamijka, oo waxaan aadi doonaa meesha ugu sareysa ee meesha toolbar lagu muujiyey. Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono waa abuurista a shiraac cusub xulashada xulashada faylka, waxaanan abuuri doonaa mid ka dibna, waxaan siin doonaa qiyamka aan u baahanahay, waxaan u habeyn karnaa ama qaadan karnaa qaab horay loo qorsheeyay.
Marka aan samayno sabuuradaha farshaxanka, waxaanu raadin doonaa qalabka burushka, kaas oo aad u fudud in la helo. Waxaan farta ku fiiqayaa daaqadda tab ee aaladda, iyo menu ayaa soo bandhigay meesha aan ka heli karno, xagga hoose, ah burush doorasho.
Daaqad ayaa ka muuqata halka ay ina tusinayso burushka aan haysano wakhtigaas. Laakiin iyada oo loo marayo toolbar, waxaan geli karnaa goobaha lagu soo bandhigo dhammaan fursadaha la heli karo, dooro cabbirka, adkaanta, nooca istaroogga iyo dabcan waxaa nala siiyay inaan kala dooranno burushyada uu Photoshop ku rakibay default. Marka aan helno burushkeena waxaan sii wadi karnaa habaynta anagoo siinna midab, mugdi iyo xitaa waan hagaajin karnaa magaceeda.
Sida Buraashka loogu daro Photoshop
Talaabada ugu horeysa waa inaan qaadnaa download ururinta burushka in aan rabno, kiiskan Watercolor Photoshop Brushes, waxaad ka heli kartaa liiska burushyada Photoshop ee bilaashka ah mid ka mid ah maqaalladayada.
Marka xirmada burushka la soo dejiyo, mid ka mid ah Tallaabooyinka khaldan ee sida caadiga ah la sameeyo waa in lagu koobiyeeyo faylashaas galka burushka Photoshop, waxaana sabab u ah in ay si gaar ah u muuqdaan ee maaha sida wax la soo ururiyey, taas oo ah waxa aan raadineyno.
Si aanay taasi u dhicin, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah in la soo dejiyo burushka burushka iyo ka hor intaadan qaadin tallaabada rakibidda faylasha, dhis ururintaada, taasna waxaynu ku gaadhi doonaa in aynu samayno gal miiska kumbiyuutarkayaga, oo nuqul ka samaynayna faylalka aanu ka hadlaynay, kuwaas oo ay ku jiraan burushka aanu doonayno.
Tusaale ahaan, waxaan soo dejineynaa qalabka Photoshop ee Watercolor, waxaan ku abuurnaa galka "Watercolor Brush Collection" ee miiskayaga oo nuqul ka samee faylalka sheegay burushyada.
Talaabada xigta waa in aad furto barnaamijka oo aad doorato qalabka burushka, sidaan horay u sharaxnay. Waxaan aadeynaa liiska hamburgerka ee ku yaal midigta sare ee daaqada burushka, oo raadi ikhtiyaarka maamulaha hore. Dhanka midig waxaa ku yaal laba badhan oo mid la sameeyay iyo mid kale oo lagu shubayo, waxaan dooraneynaa kan labaad waxaana soo bixi doona aruurinta burushyada aan abuurnay.
Markaan horeba u haysanay burushyadayada, waxaanu dooranaa oo siinaa ikhtiyaarka ah Badbaadi Set, waxayna noo soo diri doontaa in aan magac ka bedelno faylka oo aan doorano meesha aan ku kaydin karno si aan ugu isticmaali karno Photoshop.
Waxaan furi doonaa barnaamijka, aadi doonaa qalabka burushka oo fiiri fursadaha menu, halkaas oo ururinta in aan hadda ku shuban muuqan doonaa. Caadi ahaan, waxay inta badan ka soo muuqataa xagga hoose, markaa waa inaan raadinaa dhamaadka liiska markaan rabno inaan isticmaalno.
Waxa ugu muhiimsan haddii aad bilaabayso ama haddii aad horeba u ahayd xirfadle naqshadeeye waa in la abaabulo, Taasna, sidaan soo sheegnay, marka la raadinayo oo la soo dejinayo burushka buraashka waa in loo sameeyaa si nidaamsan, haddii kale aad ayey kuugu adkaan doontaa inaad shaqeyso.
Si loo dhammeeyo maqaalka waa inaan kuu sheegnaa taas waa inaad ka taxadartaa nooca barnaamijka Photoshop ee aad rakibtay on your computer. Waxaan rabnaa inaan kuu digno, sababtoo ah qaar ka mid ah tillaabooyinka ama waddooyinka ayaa laga yaabaa in wax laga beddelo iyadoo ku xiran nooca barnaamijka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loogu daro burushka Photoshop